November 2014 - Page2of3- DVB Multimedia Group
· by DVBDadmin · 13 Nov, 2014
Next on DVB Debate:Disable
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့အတူ များလှစွာသော ကဏ္ဍတွေထဲက မသန်စွမ်းတွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေဟာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်လာပါတယ်။ အနှစ်နှစ်အလလ ဖယ်ကျဉ်ခံထားရတဲ့မသန်စွမ်းတွေအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရီးမှာ တစ်ပါတည်းခေါ်ဆောင်ကြဖို့လည်း အမှန်တကယ်လိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၂.၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ အရေအတွက်အားဖြင့် ၁၃ သိန်းလောက်ရှိနေတဲ့ မသန်စွမ်းတွေဟာ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင် နဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုတွေမှာ ယနေ့အချိန်ထိ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။မသန်စွမ်းတွေအားလုံးရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှန်းကျော်ဟာ အလုပ်အကိုင်မရရှိကြဘူးလို့ စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်က ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့...
· by DVBDadmin ·9Nov, 2014
Highlights from Nuture its Nature show
“ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုက တော်ရုံလူ မြင်နိုင် သိနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုတယ်တချို့ စက်ရုံတချို့စွန့်နေတာပဲ.. အနံ့အသက်ကလဲ သိပ်များမှထွက်လာတော့ တော်ရုံမသိနိုင်ဘူး။ ရန်ကုန်မြို့က ရေပိုက်လိုင်းတွေ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက…ဒီနေ့အချိန်ထိ ပိုက်လိုင်းချဲ့တာတွေ မတွေ့ဘူး. ပိုက်လိုင်းတွေတော့ မချဲ့ဘူး အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတွေက အများကြီးဆောက်လာနေတယ်..သူတို့အတွက် ရေ မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူး မြေအောက်ရေလဲမပေးဘူး ဆိုတော့.. စကတည်းက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်သင့်တာတွေလေ။ အစိုးရအနေနဲ့က စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မူဝါဒအပိုင်းတွေမှာ ဘေးကျပ်နံကျပ်ဖြစ်နေပုံပေါက်တယ်။” ဦးကျော်ဦး...
· by DVBDadmin · 11 Nov, 2014
DVB Debate Android app
Join DVB Debate now on your smart phone and tablet and download the free Android app in the Google Play store or by using the QR code: all videos, all FB posts, pictures and...
· by DVBDadmin ·5Nov, 2014
Next on DVB Debate:Nurture/Nature
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အသံတွေညံလာခဲ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အသိကို တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အဆက်ဆက်သောအစိုးရတွေကိုယ် တိုင် မသိရှိခဲ့ကြသလို ပြည်သူတွေကိုလည်း အဲဒီအသိတွေကို ဖြန့်ဝေပေးခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ မြေပေါ်မြေအောက်မကျန် သံယံဇာတတွေကို အစိုးရတွေက စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ထုတ်ယူရောင်းချခဲ့ကြသလိုပဲ ပြည်သူတွေကလည်း စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်ပစ်၊ သစ်ပင်တွေကို ခုတ်လှဲ၊ချိုးယူ၊ထင်းစိုက်။ အစိုးရနဲ့ပြည်သူ မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုဖို့ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ အလျှံအပယ်ထွက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေက ပြည်သူတွေအတွက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်...
· by DVBDadmin ·3Nov, 2014
DVB Debate App
The Android App is ready for download in the Google Play Store > Please click this link to the Play Store and let us know what you think. DVB Debate will be available in...